ဗူးသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ရုံးပတီသီး၊ အာလူးသီး၊ မုန်လာဥဖြူတို့ကို အရွယ်တော်တုံးထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီကို ထောင်းထားပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီးထားပါ။ နံနံပင်ကို အရှည်လိုက် လက်နှစ်ဆစ်ခန့် ဖြတ်ထားပါ။
ဆီအိုးတည်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီကို ဆီသတ်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီ ၀ါရောင်သန်းလာပြီး နွမ်းလာပြီဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပြီး လိပ်အောင်ဆီသတ်ပါ။
ပြီးရင် အာလူးသီး၊ မုန်လာဥဖြူ၊ ဗူးသီး၊ ရုံးပတီသီး၊ ခရမ်းသီးတို့ကို အစဉ်အတိုင်းထည့်၊ ငံပြာရည်ထည့် ဆီသတ်ပါ။
ပြီးရင်ရေထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ။ ပွက်ရင် ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ မဆလာ သင့်ရုံခတ်၊ နံနံပင် အရှည်လိုက်သင်ထားတာထည့်ပြီး ချလို့ ရပါပြီ။
ချဉ်စေချင်ရင် မန်ကျည်းမှည့် လက်တစ်ဆစ်လောက် ရေနွေးနဲ့ဖျော်ပြီး ငံပြာရည်ထည့်တဲ့ အချိန်မှာ ထည့်လိုက်ပါ။
Posted by MyatMoeMay at 07:352comments:
နောင်တော်ကြီးတစ်ပါးက ငါးဟင်း မြန်မာချက် ချက်ချင်တာ ဘယ်လိုချက်ရမှန်းမသိလို့ဆိုလို့ မေသိသလောက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မေကတော့ ဘာပဲချက်ချက် စိတ်ထဲရှိသလိုချက်လိုက်တာပဲ။ သူများတွေချက်တဲ့ပုံနဲ့ တူမတူတော့မပြောတတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စားလို့ကောင်းရင် ပြီးတာပါပဲလေ။
လှီးပြီးသား ငါးကို ဆား၊ ဆနွင်း၊ အချိုမှုန့်၊ ဂျင်းထောင်းထားတာနဲ့ ဆုပ်ပြီး နယ်ထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
ပြီးရင် ငါးကိုထည့် ရေမြုပ်ရုံထည့်ပြီး အဖုံးအုပ် ဆူအောင်တည်ပါ။ ဆား၊ အချိုမှုန့် သင့်ရုံထည့်ပါ။ ရေအနေတော်ကျန်ပြီဆိုရင် နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးထည့်ပြီး မီးပိတ်၊ အဖုံးပိတ်ပြီး ထားလိုက်လို့ရပါပြီ။
မွှေးကြိုင်ပြီး အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by MyatMoeMay at 04:12 No comments:
သူ့ ချည်ခင်တွေနဲ့ 
ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက တိုက်ခန်းခ တနှစ်စာချုပ်ရေးအတွက်စိတ်တွေညစ်ကြရတိုင်း အမြဲပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ကဗျာလေးပေါ့။ ကူးထားတဲ့နေ့ စွဲရယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနာမည်ရယ် မှတ်မထားမိဘူး။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးလေ။ အတူနေခဲ့တဲ့သူတွေကို သတိရလို့ ။ မိဘတွေနဲ့ဆယ်တန်းအောင်ကတည်းကခွဲပြီး တနယ်တကျေးမှာပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ကိုယ့်အတွက်တော့ အတူနေတဲ့အခန်းဖော်တွေကပဲ ညီအစ်မတွေဖြစ်လာကြတယ်။ ရန်ကုန်မှာက ငါးယောက်နေတဲ့အသိုက်အမြုံလေးပေါ့။ ခုတော့ သုံးယောက်နေတဲ့အသိုက်အမြုံလေးထဲရောက်နေပြန်ရော။ ဒါပေမယ့် အဲဒါလဲကြာကြာမခံပါဘူး။ ခုတော့ နှစ်ယောက်ထဲကျန်တော့တယ်။ မိုး ကတော့လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းပြေးပြီး)။ ရှေ့မှာ ဘယ်လိုအသိုက်အမြုံလေးတွေနဲ့ထပ်ကြုံရအုန်းမယ်မသိ။ တခါတလေလည်း ဘာကြောင့်များအတည်တကျမနေရပါလိမ့်လို့စဉ်းစားမိတယ်။ ခုဆို လူများများနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းမနေတတ်တော့တာခက်တယ်။ နားညည်းစိတ်ရှုပ်လာရော။ ကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုအတိုင်းအတာက အသက်နဲ့ပြောင်းပြန်များ အချိုးကျနေလားဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားရအုန်းမယ်။ အမေပြောသလို တယောက်ထဲဒီလောက်တောင်နေချင်နေရင် လယ်ကွင်းထဲက သစ်ပင်ခွကြားမှာ သွားထိုင်နေတဲ့။ ဘာသွားစားရပါ့။ ခက်တယ်။
Posted by MyatMoeMay at 05:374comments:
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့်
အီးမေးထဲကရတဲ့ သိမ်းထားဖို့ကောင်းတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာစုလေးပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ဖတ်ဖို့နဲ့ မဖတ်ရသေးသူတွေဖတ်ဖို့ မျှဝေပါတယ်။ ကိုတင်ဦးလွင်ထုတ်နှုတ်ရေးသားထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူရေးတာလဲသိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါနော်။
၂၀၀၉ ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂသီတင်းဌာနက ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းမှုးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ကမ္ဘာကျော် စတန်းဖို့ တက္ကသိုလ်တွင် ဓါတ်ပုံပြပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ကြောင့် သီတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီတင်းကို ဖတ်ရတဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနဲ့ များစွာကျေနပ်အားရခဲ့သလို့ ၊ ဦးသန့်ကို မမေ့လို့ ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် တက္ကသိုလ် ကိုလည်း သတိတရ ရှိပေးခဲ့တဲ့အတွက် များစွာ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အဆိုပါ ဓါတ်ပုံပြပွဲ ဖွင့်လှစ်တဲ့အခန်းအနားမှာ ကုလသမဂ္ဂပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်သွယ်ရေးဌာန မှ တ၀န်ရှိသူ မစ္စတာ ကီရိုအာဆာကာက-
ဦးသန့် သည် ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ ကုလ အကြီးအကဲ တစ်ဦး အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူတစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဓါတ်ပုံပြပွဲ ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဦးသန့်သည် အမြော်အမြင်ကြီးမားပြတ်သားသူတစ်ဦးဖြစ်ပီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကို ကမ္ဘာ့နေရာ အသီးသီးမှ ပြည်သူများ၏ မျော်လင့်ချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော အဖွဲ့ကြီး တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ယုံကြည်စေခဲ့သူ ...ကုလ၏ ရှေ့ဆောင် အကြီးအကဲ တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖြတ်ရေး နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းကြီးတွေ အတော်များများဟာ ဦးသန့်ကိုယ်တိုင် ထူထောင်ပေးခဲ့လို ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ..ဟုလည်း ဆက်လက် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၁ ခုနစ်မှ ၁၉၇၁ ခုနစ် အထိ ဆယ်နှစ်တာကာလ ကုလ အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း
ဦးသန့်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသားတို့အားအကျိုးပြုစေခဲ့သော ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲ ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည် ဟု သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖန် ကုလ ပြောခွင့်ရ ပုဂိုလ်တစ်ဦးက-
ဦးသန့်ဟာ အတိုင်းအဆ များပြားလွန်းစိန်ခေါ်မှုကြီးတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျူးဘား ဒုံးကြည်အရေးအခင်းကိစ္စ၊
ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်ထွန်းရေး ကိစ္စ၊ တော်အာဖရိက လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု ကိစ္စ၊ စတာတွေကို အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သံတမန်ကြီးတစ်ဦးပါဘဲ..လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
လူသားဖြစ်တည်မှူ နှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ တန်ဘိုးဟူသည် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သော ဥစ္စာများထက် များစွာ သာလွန်ပါသည်။
အစိုးရများ၊ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ နှင့်အိုက်ဒီယာများဟူသာ် ဖြစ်ပျက်သဘော မျှသာ ဖြစ်ပြီး လူသားဖြစ်တည်မှူသည်သာလျှင် ကျန်ရှိပါမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ထိုစာတမ်းသည် ယနေ့ကုလသမဂ္ဂကြီး၏ အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်စေမည့် ၊ ကုလကြီး အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်စေမည့် မိန့်ဆိုချက်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဦးသန့်သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် အဖြစ် ၁၉၆၁ မှ ၁၉၇၁ အထိ ဆယ်နှစ်တာကာလ အတွင်း ကြီးမားလှစွာသော ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းကြီးများကို အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ဦးသန့်အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့သော ပြဿနာ ကြီးများမှာ...
တတိယ ကမ္ဘာစစ်သို့ဦးတည် ခဲ့သော ကျူးဘား ပြဿနာ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကိစ္စ နှင့်
ဦးသန့်၏ ကုလအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဘ၀တွင် တာဝန်ကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းထမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ကမ္ဘာအရေးအခင်းများကို ပြေလည်အောင် စွမ်းစွမ်းတမန် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့မှုတိုေ့ကြာင့် သူအားကမ္ဘာတစ်ဝှ်းလုံးရှိတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တို့မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ (၁၇) ဘွဲ့ကို ပေးအပ်ချီးမြင့်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၆၆ စက်တင်ဘာ ၂၈ တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သော ဂျဝါဟာလာနေရူး ဆု ကို ရရှိခဲ့သည်။ ရူပီး တစ် သိန်း ရရှိသည်။ ၄င်းရရှိသော ဆုငွေကို ဦးသန့်ပညာတော်သင်ဆု အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂကျောင်းသို့ပြန်လည် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
Posted by MyatMoeMay at 20:122comments:
လောကကြီးလည်း အချိန်တွေပြောင်းတာနဲ့အမျှ လိုက်ပြီးပြောင်းလာလိုက်တာ ကောင်းတာကနဲနဲ ဆိုးတာကများများ ဆိုသလိုကို ဖြစ်နေတော့တာပါပဲလား။ အမှန်တရား အမှားတစ်ရာလို့ လူတွေ နောက်ပြောင်ပြောနေကြရာကနေ စကားနောက် တရားပါများ ဖြစ်သွားသလားမသိ၊ လူ၁၀၀မှာ ၁ယောက်တောင် တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့သူကို ရှာရ ခက်ခဲနေပြီ။ ကောင်းတဲ့အထဲမှာ ကိုယ်မပါနိုင်သေးရင်တောင် ဆိုးတဲ့အထဲမှာ မပါဖို့ကိုတော့ သေချာသတိထားရမယ်။
လူတွေလေနော်၊ တိရိစ္ဆာန်တွေမှ မဟုတ်တာ။ ဘာလို့ ရှိတဲ့ဦးနှောက်ကို အများကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတာမျိုး မစဉ်းစားမိခဲ့ရင်တောင်၊ ဘယ်လို သူများအပေါ် ထိခိုက်နာကျင်ပျက်စီးအောင် လုပ်ရမလဲဆိုပြီး နိမ့်ကျတဲ့ အတွေးအကြံတွေနဲ့ အစွမ်းကုန် ရိုက်ချချင်ကြတာလဲ။ ကမ္ဘာကြီးက လုံးနေသလို သံသရာဆိုတာကလည်း လည်ပတ်နေတာလေ။ ကိုယ့်အလှည့်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့အဖြစ်တွေ ပြန်ကြုံရမှာကို ဘာလို့များ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်ဖြစ်နေတာလဲ။
မကောင်းဘူးဆိုတာ သေချာနေတဲ့လူကို လုံးဝ ယတိပြတ် အဆက်အသွယ်ဖြတ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ယုံကြည်ထားတဲ့ လုပ်သင့်တဲ့အရာ။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အကြံပေးတယ်။ မေးထူး ခေါ်ပြော ခပ်တန်းတန်းပဲနေဖို့ ဆိုတာမျိုးကို..။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော ဘာလို့ ဒီလိုလူတွေကို ခွင့်လွှတ်ဖို့နေထားလို့ လျစ်လျူရှုတာလေးတောင် မလုပ်နိုင်ရတာလဲ။ မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်က ဘာသိဘာသာပဲ အခေါ်အပြောမပျက် ခပ်တန်းတန်းနေဖို့တောင် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ဘူး။
အမှန်တရားဆိုတာက ဘာလဲ။ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်ထဲက လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွဲလို့ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကင်းအောင်နေရမှာလဲ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အခုတစ်လော ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပါ။
Posted by MyatMoeMay at 00:43 No comments:
အနာဂတ် - ၁
ဘာရယ်မဟုတ်.. စာရေးဖို့ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ဘလော့ပေါ်ရောက်လာခဲ့တာပါ။
တစ်သက်လုံး စာကို မယ်မယ်ရရမလုပ်ခဲ့ပဲ ခုလို အနားနီးမှ ကောက်ခါငင်ခါထလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။ လုပ်တာတောင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ်လို့ပဲ အောက်မေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြသနာက ဘာကိုမှ အရမ်း အာရုံမစိုက်ခဲ့ဖူးလို့လားမသိ.. စာလည်းလုပ်ရော၊ ခေါင်းကိုက်၊ နားကိုက်၊ ဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်၊ စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် လန့်လာတယ်။
တော်သေးတာက အစ်မတော် မြတ် ရှိနေပေလို့။ သူလည်း မေ့ဒဏ်တော်တော်ခံရရှာပါတယ်။ တတ်နိုင်ဘူးလေ။ မိုးက ဖုတ်ဖတ်ခါပြီး မေတို့နှစ်ယောက်ကို ထားခဲ့တာဆိုတော့ မေ့မှ ပြေးပဲကြည့်ကြည့်၊ ရိုးရိုးပဲကြည့်ကြည့် ရွှေမြတ်ပဲရှိတာကိုး။
မနိုင်းနိုင်းစနေရေးသလို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဖတ်ဖို့ ဆိုပြီး စာတွေထိုင်ရေး၊ ထိုင်ဖတ်လုပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ။ သူများတွေဖတ်ဖို့ စာမျိုးကိုမှ မရေးတတ်တာ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်ဖတ်လုပ်တာတောင် တစ်ခါတစ်ခါ ကြောင်လိုက်တာထင်ပြီး (တစ်ချို့သော ကိုယ်ချင်းမစာတတ်သူများက ဖျက်ခိုင်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ဖျက်လိုက်ရတာကလည်း ရှိသေး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ.. ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်းကို ပြီးဆုံးအောင်မြင်အောင်တော့ လျှောက်မှဖြစ်မှာပေါ့။ လူပီသအောင် ဘာတွေလုပ်ရမယ် အကုန်မသိပေမယ့် ဖေကြီးပြောသလို "ဘာပဲလုပ်လုပ် လူချင်းတူအောင်လုပ်" တဲ့။ သူများတွေတောင်လုပ်နိုင်သေးတာ.. ကိုယ့်မှာလည်း သူတို့လိုပဲ ခေါင်းတစ်လုံး၊ လက်နှစ်ဘက်၊ ခြေနှစ်ဘက် အားလုံးတူတူပဲ။ သူတို့က ကိုယ့်ထက် ဘာမှ ပိုရှိနေတာမှ မဟုတ်တာလေ။ ကိုယ်လည်း ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။ လုပ်ရင်လည်း ဖြစ်ရမှာပေါ့။
စကားမစပ်.. မမမိုး @ GiKiကို သတိရတယ်.. မြန်မြန်ပြန်လာရင် ကောင်းမယ်။ :(
Posted by MyatMoeMay at 08:42 1 comment:
… (+ သို့ -) ...
လူတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်က ချစ်တဲ့အချစ်ဟာရိုးသားသန့်စင်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေလိုသလို မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ပါမယ်။ မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကွာဟချက်တွေ၊ နားလည်မှုလွဲမှားတာတွေဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။ ပေးဆပ်ခြင်းတွေရှိနိုင်သလို ပြန်လည်ရယူလိုမှုတွေလည်း ရှိမှာပဲ။ ချစ်တဲ့သူဆီကသာ လိုချင်တဲ့ လိုအပ်မှုမျိုးပေါ့။ “ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကတော့ ပေးဆပ်မှုသက်သက်ပဲ“ လို့ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ချစ်တဲ့ အဲဒီလူကိုပဲပေးဆပ်ချင်တာလေ။ “အဲဒီလူ“ ဆိုတဲ့အရာကပဲ ကိုယ်ကပြန်ရလိုက်ခြင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ရယူလိုခြင်း ပဲဖြစ်မယ်။ သူ့ဆီက ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ပါဘူးဆိုရင်တောင် “သူ“ ဆိုတဲ့အရာကပဲ ကိုယ့်မျှော်လင့်ချက်လေ။
နာကျင်ခြင်းတိုင်း ဟာမခါးသီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဝမ်းနည်းရခြင်းကတော့ ကိုယ့်အတွက်ခါးသီးတယ်။ အဲဒါနဲ့အတူ သိမ်ငယ်မှုကပါ ရောပါလာနိုင်တယ်လေ။ တစ်ယောက်ကမြင့်မားပြီး ကျန်တစ်ယောက်ကနိမ့်ကျနေမှသာ သိမ်ငယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ သေးငယ်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုလေးတစ်ခု၊ အသိအမှတ်လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်လိုချိန်မှာ မရရှိလိုက်ရင်လဲ ဝမ်းနည်းသိမ်ငယ်မိတာပါပဲကွယ်။
Posted by MyatMoeMay at 00:36 No comments:
ပုံကို ဂဲဂဲ ဆီကယူပါတယ်။
မြတ်ကလေ ကိုယ်ကသာစာမရေးတတ်တာ၊ စာရေးကောင်းတဲ့သူဆို အင်မတန်သဘောကျတာ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာတွေဆို သိမ်းထားပြီး ပြန်ပြန်ဖတ်ရတာအမော။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်သိမ်းထားရလောက်အောင်ကြိုက်ရတဲ့စာတွေက အမြဲလိုလိုမှမဖတ်ရတာ။ ဂျူး ဆို တအုပ်ဆို၊ ဆိုသလောက်ပဲ။ စောင့်ရတာ လည်ပင်းညောင်ရေအိုးမကတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် စာရေးဆရာစွဲ မထားတော့ ဖတ်စရာသိပ်တော့မရှားဘူးပေါ့။
ရှစ်တန်း ကိုးတန်းလောက်တုန်းကတော့ မဂ္ဂဇင်းထဲက ကြိုက်သမျှစာတွေကို ဖြဲထားပြီးသိမ်းတော့တာပဲ။ အတ္တကြီးတာလေ။ အိမ်ကလည်း အဲဒီအကျင့်ကိုလုံးဝမှမကြိုက်။ နောက်တော့မှပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ သူများတွေလည်းဖတ်ချင်မှာပဲဆိုတာ။ အဲဒီအသိကလည်း ကိုယ်တိုင်ကြုံလိုက်ရမှ သိလိုက်တာပါ။
ဘယ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဘာအကြောင်းအရာလည်းတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ခါနီးဆိုတာတော့
မှတ်မိတယ်။ စာရွက်ကြီးက ပြဲနေရောလေ။ နောက်တမျက်နှာမှာပါတဲ့ မင်းသမီးပုံကိုလိုချင်လို့နေမှာပေါ့။ ကိုယ့်မှာတော့လေ တနေကုန်နေရခက်လိုက်တာ။ နောက်စာအုပ်ဆိုင်မှာထပ်ငှားရအောင်ကလည်း စာအုပ်က လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလေးလလောက်ကဟာဆိုတော့ နှမလက်လျော့နေလေတော့ပေါ့။
အဲဒီကတည်းက ဘယ်တော့မှစာရွက်မဖြဲတော့ဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တာရှိရင် မိတ္တူပဲသွားဆွဲလိုက်တော့တယ်။ မိတ္တူဖိုးကတော့ ဘတ်ငွေလေးတွေပေါ့ကွယ်။ အမီးပြောသလိုပေါ့။ ဒယ်ဒီ့ပိုက်ဆံလည်း မမူပိုက်ဆံ၊ မမူပိုက်ဆံလည်းမမူပိုက်ဆံ…တဲ့။ မြတ်ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးသမီးပဲဟာ…နော့…။ တချို့ စာတိုတာလေးတွေဆို လက်ရေးနဲ့ကူးထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့လည်းအရင်ကတည်းကပါ။ (ဟဲဟဲ…အမှုလေးများ နည်းနည်းပေါ့မလားလို့။) အဲဒီတော့ ကောင်းလာတာလေးတွေက စာတွေပြန်ဖတ်ရင် ခိုးမဖတ်ရတော့ဘူးပေါ့။ စာရွက်တွေလည်းမဖွက်ရတော့ဘူးလေ။ မဟုတ်ရင်အိမ်ကဆူမှာစိုးလို့ခိုးဖတ်၊ ပြီး ဖွက်နေရတာ ရည်းစာစာ ကျနေတာပဲ။ အဲဒီတော့မှလည်း စဉ်းစားမိတယ်။ ငါတော်တော်စိတ်ပေါ့သွားပါလားပေါ့။ မဟုတ်ရင် အိမ်ကသိမှာ တထင့်ထင့်နဲ့လေ။ အမီးကဆူလိုက်ရင် တော်ပါတော့၊ ရိုက်သာသတ်လိုက်ပါတော့လို့ ပြောရလောက်အောင်ကို ဆူတတ်တာ။
ကျွန်မက တော်တော် ကိုယ်ချင်းမစာတတ်တာ။ လက်ကိုင်ပြုထားတာကလည်း ကိုယ်ကမှ အရာတခုကိုမခံစားဘူးရင် သူများခံစားနေရလည်း အဲဒီခံစားချက်ကိုနားမလည်ပေးနိုင်လောက်ဘူး လို့လေ။ နားလည်ပေးနိုင်လည်း နည်းနည်းပါးပါးပေါ့၊ ကိုယ်နဲ့စာပြီးတော့ တော့
နားမလည်နိုင်လောက်ဘူး ထင်တာပဲ။ ခုများတော့လည်း ကာယကံရှင်တွေထက်တောင် ပိုနေပြီလားမသိ။ အပူအပင်ကင်းတဲ့ဘဝ၊ အရွယ်တွေကို ကျော်လာလို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။
ဘတ် စရာမလိုတဲ့ ကိုငြိမ်းရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဘယ်ခုနှစ်ကမှန်းတော့မသိ။ (တော်သေးတယ် ကဗျာဆရာနာမည်ကိုသိလို့)။ ဘေဿဝိုင်း၊ ဒီကဗျာလေးက လက်နဲ့ကူးပြီးသိမ်းထားတဲ့ များစွာထဲက တခုပါ။
တစ်မူး၊ တစ်ပဲ၊ တစ်မတ်
ပိုက်ဆံကို ဂရီး ဂရီး မပေးနဲ့” တဲ့
ဇီးရွက်ရဲ့ အချင်း မျိုးဖြစ်အောင်
အမိန့် တုဖုံးထားတဲ့ အမေ့ရဲ့စကား
Posted by MyatMoeMay at 07:203comments:
ပုံး ကြိုက်တဲ့ ခင်နှမရယ်
ပုံတွေကို ဂဲဂဲဆီ ကယူပါတယ်။
မြတ်က ပုံး တွေ၊ ဗူးတွေ နဲ့ပစ္စည်းသိမ်း ရတာ အင်မတန် ကြိုက်။ နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့် ကြည့် ပီး သူ တို့တွေ ပစ္စည်း တွေ ကို ပုံးတွေ၊ ဗူးတွေ နဲ့ရွှေ့နေရင် ဘာလို့ မှန်းမသိ အရမ်းသဘော ကျတာ ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ။ သယ်ရ ပြုရ၊ ရွှေ့ရတာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ လွယ်လွယ်ကူကူရှိတယ်လို့လည်း ထင်တယ်လေ။အရင် ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်တုန်းကလည်း ရုံးခန်းကကောင်မလေး နဲ့ခင်အောင်ပေါင်းထားလိုက်တာပေါ့။ A4 ပုံးလွတ်တွေမျက်နှာနဲ့လေ။ ပြီးရင်အိမ်ကစာအုပ်တွေ နဲ့ ပစ္စည်းတချို့ ကို ထည့်ပြီးသိမ်းထားတာပေါ့။ နောက် မြတ် ရဲ့အကျင့်တစ်ခုက သိပ်အသုံးမလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေ ကို မျက်စိရှေ့မှာမမြင်ချင်ဘူး။ အဖေကတော့ နာမည်ပေးထားတယ်။ မသိမ်းပျောက် တဲ့။ စာအုပ်တွေကို စက္ကူပုံးတွေနဲ့သိမ်းရတာ ပရုတ်လုံးဖိုးတော့ တော်တော်ကုန်တယ်။ စာအုပ်ရော၊ ပုံးရောက စက္ကူတွေဆိုတော့ ပိုးကောင်တွေအတွက်က အချိုရှာ သကာတွေ့ ပေါ့။
ဒီရောက်လာပြန်တော့လည်း မေ့ ကို ဒုက္ခပေးရပြန်တယ်။ ဘာရှိရမလဲ၊ A4 အတွက်ပဲပေါ့။ သူ့ခမျာလည်း အဲဒီပုံးတွေနဲ့ဆို လိုင်းကားနဲ့ပြန်မလာနိုင်ဘူးလေ။ အငှားကားနဲ့ ပြန်လာရတော့တာပေါ့။ ကားခလား? ပြန်မပေးပါဘူး This man နဲ့ this man ပဲဟာ နော့? အခုလည်း ပုံးတွေထပ်လိုနေပြန်ဘီလေ။ မိုးကပြန်တော့မှာဆိုတော့ သူ့စာအုပ်တွေကို လေယာဉ်နဲ့မသယ်တော့ဘဲနဲ့ အိမ်အထိပစ္စည်းတွေပို့ပေးတဲ့နေရာကနေပဲ ပုံးတွေနဲ့ပို့လိုက်တော့မယ်လေ။ အဲဒီတော့ မေ့ ရဲ့ ပုံးတာဝန်က ထပ်ရှိလာတော့တာပေါ့။ သူ့ရုံးကလူတွေကတော့ သူ့ကိုပုံးကုန်သည်လို့တောင်ထင်နေလောက်ပြီထင်တယ်။ မေ့ တာဝန်ပြီးတော့ မိုးတာဝန်ဖြစ်တဲ့ ချက်ပြုတ်ရေးဖက်လှည့်ကြတော့ ခြေနေ က မကောင်း။ ချက်စရာ နထ္ထိ။ ဆီ နဲ့ ဆန်ကစ အိုးလွတ်၊ ပုံးလွတ်။ (တကယ်တော့ဝမ်းသာစရာပါ။ မတော် ဆန်နည်းနည်း ကျန်နေ သေးရင် ဆန်ပြုတ်ပြုတ်ဖို့ပဲ ချောင်းနေတဲ့ မေ့ လက်စာ အဲ လက်ရာ ဆန်ပြုတ်နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရမှာ) အဲဒီဒေါ့ ထုံးစံအတိုင်းသွား နေကျ အိမ်နား က Carrefour (ကြော်ငြာခြင်းမဟုတ်ပါ) ကိုပဲ သုံးယောက်သား ချီတက်ကြတာပေါ့။
Carrefour ရောက်တော့ လိုအပ်တာတွေ မှာစား အဲ ဝယ်ခြမ်းရင်းနဲ့ မိုးတယောက် ရတနာပုံဆိုက်တော့တာပါပဲ။ သိကြတဲ့အတိုင်း Supermarket ဆိုတော့ ပစ္စည်းတိုင်း၊ ပစ္စည်းတိုင်း က ပါကင် ပုံးကြီးတွေ နဲ့ပဲပေါ့။ ပစ္စည်းတွေကို စင်ပေါ်စီလိုက် တော့ ကျမ တို့အကြိုက် ပုံးလွတ်တွေက အောတိုက်ပေါ့။ မိုးဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ။ ပုံးတွေထဲက ကောင်းတဲ့ပုံးတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးတော့တာပေါ့။ ပြီးတော့သုံးယောက်သား ခပ်တည်တည်နဲ့ ငွေရှင်းပြီးထွက်ခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ Carrefour နဲ့ အိမ်နဲ့က ငါးမိနစ်စာပဲ ဝေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပစ္စည်းတွေ ဗလပွနဲ့ဆိုရင်၊ လေးလည်းလေးရင် ငါးမိုင်ခရီးလောက်ထင်ရတယ်။ အဲဒီတော့ Carrefour အထွက် နည်းနည်းလည်းလှမ်းရော ဖြန့်ထားတဲ့ပုံးခွံတွေကို ပုံးပြန်ခေါက်၊ ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီး ပြန်လာကြတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ မိုက်ကြီးနဲ့ ပုံးတွေများလှမ်းတောင်းလေမလား တထိတ်ထိတ်နဲ့လေ။ ဘာလို့ဆို အဲဒီလိုယူလို့ ရ၊ မရ မသိဘူးလေ။ မေးလည်း စကားကမှ မပေါက်။ အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဟင်း ချနိုင်တော့တယ်။ ဒါတောင် လမ်းတလျှောက်လူတွေက ကြည့်ကွက်၊ ကြည့်ကွက်နဲ့။ သုံးယောက်လုံး ဂရုမစိုက်ပေါင်။ တလောကလုံး ကိုယ့်လုပ်စာထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ရုပ်နဲ့ နေ နေ လိုက်တယ်။
ဟီး...မေ့တွားလို့၊ မြတ်ရဲ့တာဝန်ကလား? သြော်………ဘာရှိရမလဲလေ၊ ချက်ကျွေးသရွေ့လေး ဘာမဆို မငြီးငြူတမ်း၊ စေတနာ ဗလပွနဲ့ အများတကာစိတ်ချမ်းသာအောင်စားပေးရတာ မြတ်ရဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်ပေါ့။
Posted by MyatMoeMay at 01:062comments:
ဒီနေ့ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့အိမ်နဲ့နီးတဲ့ ပန်းခြံလေးထဲသွားထိုင်မိတယ်။ ကြားရက်ဆိုတော့ လူရှင်းမယ်ထင်ပြီးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သပွတ်အူမျောလာတာထက်ဆိုးသွားတယ်။ လူတွေ လူတွေဆိုတာတအားပဲ။ အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်လေးတွေကပိုများတယ်။ သူတို့ အတွက်ဘာပွဲများရှိလဲမသိဘူး။ သူ့ အစုလိုက် အစုလိုက်နဲ့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာ။ ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေကလဲ ခုံတန်းလေးတွေပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်။ တချို့ လူရွယ်တွေနဲ့အဖိုး၊ အဖွားတွေကတော့ လမ်းလျှောက်သူကလျှောက်၊ ပြေးသူကပြေးနဲ့ညနေခင်းလေးက အရမ်းကို အသက်ဝင်လွန်းနေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့လမ်းတပတ်လောက်ပဲလျှောက်ပီး လူရှင်းတဲ့နေရာက ခုံလေးမှာထိုင်ရင်းနဲ့ငါ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုပြီးတွေးမိသွားရင်းက ကဗျာမမှီ စာမပီလေး တခုကိုချရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အပြန်လမ်းမှာတော့ ခူးဖို့တေးထားတာကြာနေတဲ့ မြက်ပန်းလေးတွေကို ပန်းအိုးထိုးဖို့ ခူးခဲ့တယ်။
အလင်းရောင်တလက်လက်နဲ့လမ်းသစ်၊ နေ့ သစ်မှာ
မျှော်လင့်ချက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေနဲ့မီးခဲလေးတွေ
.......................တွေ နဲ့ 
လှပစေဖို့ အတွက် ညှိပေးမလိုလိုနဲ့ 
ချစ်လို့ စ ပါတယ်ဆိုပေမယ့်
စ သူပျော်စေဖို့ငိုနေရတဲ့ကြယ်လေးတွေ
အေးမြစေဖို့ ဆိုတဲ့ စေတနာတပတ်နွမ်းနဲ့ 
လောကဟာ အကျည်းတန်လာနေပြီလား !!!
Posted by MyatMoeMay at 07:14 No comments:
B the first to sayaBD wish..
ATK's Alternative Blog